काम को लागी सांता Muerte लाई प्रार्थना। ? 24 घण्टा मा काम गर्दछ!
कामका लागि सान्ता मुर्तेलाई प्रार्थना गर्नुहोस् यो अत्यधिक शक्तिशाली छ।
यो यति धेरै काम गर्दछ यदि तपाइँ कुनै काम खोज्दै हुनुहुन्छ जस्तो कि यदि तपाइँलाई चाहिएको कुरा केही समस्या समाधान गर्न जुन तपाइँको कार्य वातावरणमा तपाइँलाई प्रस्तुत गरिएको छ।
नकारात्मक उर्जा जुन हामीले महसुस गर्छौं, कहिलेकाँही हाम्रो कार्यस्थलमा खराब हुन्छन् र यसले हाम्रा सहकर्मीहरू, मालिक र आफैलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर गर्न सक्छ।
1 कामका लागि सान्ता मुर्तेलाई प्रार्थना गर्नुहोस्
1.1 के पवित्र मृत्यु शक्तिशाली छ?
1.2 के यो प्रार्थना भन्नु खतरनाक छ?
1.3 जब म कामको लागि पवित्र मृत्युमा प्रार्थना गर्न सक्छु?
मेरो प्यारो र प्यारो धन्यको मृत्यु, म तपाईंलाई यी शब्दहरूको लागि बिन्ती गर्दछु किनकि मलाई तपाईंको सहयोग चाहिन्छ।
काममा म आफू समस्याहरूको बीचमा जाँदैछु जसले गर्दा मेरो स्थायित्वमा श doubt्का लाग्छ।
म गिराउने ईर्ष्याको शिकार भएको छु र मलाई तल हेर्न चाहन्छु।
मँ बदल्न चाहेको नराम्रो समयबाट गुज्रिरहेको छु, मलाई यस्तो जागिर चाहिन्छ जहाँ ईर्ष्या हुँदैन, जहाँ मेरो सीप स्वीकारिएको छ र अझ राम्रो हुन सक्छ। मेरो परिवारलाई चाहिने सान्त्वना दिन।
म तपाइँलाई मेरो जागिर राख्न सोध्छु, र यदि यो हुन सक्दैन भने। मलाई अझ राम्रो बनाउन मद्दत गर्नुहोस्। म अन्तर्वार्तामा जानको लागि दिन सोध्छु।
म पूरा महसुस गर्न को लागी मेरा पेशेवर लक्ष्यहरु लाई प्राप्त गर्न चाहन्छु।
म अझ राम्रो जागिर, राम्रो तलब चाहान्छु, जुन मेरो व्यावसायिक लक्ष्यको सीमा छैन।
म राम्रो हुन बाहिर उभिन खोज्छु। त्यसैले म तपाईं कहाँ आउँछु, तपाईंको भलाइ र शक्ति छ इन्फिनिटो कि म मेरो समस्याहरू तपाईको हातमा छोडिदिन्छु। धन्यबाद, म तपाईंलाई असीम धन्यवाद दिन्छु, म तपाईंको विश्वासी विश्वासि हुँ।
यो सजाय त्यो समयमा लागू हुन्छ जब हामी जागिरको अन्तर्वार्तामा जान्छौं, जब हामी आफूले चाहेको जागिरको लागि आवेदन दिन लाग्छौं, सोध्न यसले हामीलाई पदोन्नती प्राप्त गर्न वा हाम्रो तलबमा बढ्न मद्दत गर्दछ, यदि तपाइँ एक पार्टनर, मालिक, ग्राहक वा कर्मचारी संग कार्यस्थल मा एक कठिन समय को माध्यम बाट जाँदै हुनुहुन्छ।
जे भए पनि, यस प्रार्थनाले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ सबै कार्यस्थलको साथ के गर्नुपर्दछ.
के पवित्र मृत्यु शक्तिशाली छ?
यो धेरै वर्षदेखि अत्यधिक सम्मान गरिएको छ, विशेष गरी मेक्सिकोका मानिसहरूले।
विश्वासीहरू बढ्दो संख्यामा छन् र यसले पवित्र मृत्युको शक्ति मात्र देखाउँदछ।
त्यहाँ यो एक दुष्ट आत्मा हो कि भनेर विचार गर्नेहरू छन् तर जब यो चमत्कार र यस पवित्रले निर्देशन र मद्दतको खोजीमा आउने सबैलाई दिएको सहयोग देख्दछौं भने यो पूर्णतया आधारहरू बिना हो।
के यो प्रार्थना भन्नु खतरनाक छ?
प्रार्थना तिनीहरूमा तिनीहरू कुनै खतरनाक छैनन्।
यद्यपि तिनीहरूलाई पूर्ण जिम्मेवारीका साथ गर्नु राम्रो हुन्छ किनकि धेरै चोटि हामी त्यस्तो चीजको लागि सोध्छौं जुन हाम्रो लागि उपयुक्त हुँदैन, एक मित्र वा परिवारको सदस्य।
प्रार्थना एक संवेदनशील मुद्दा हो किनकि हामी एक सय प्रतिशत आध्यात्मिक मैदानमा प्रवेश गर्दैछौं जहाँ हामी कसरी सार्न जान्नुपर्दछ किनकि नकारात्मक विश्वासको कमजोरीहरूको खोजीमा लुकिरहेको छ।
जब म कामको लागि पवित्र मृत्युमा प्रार्थना गर्न सक्छु?
कुनै पनि समयमा, यो प्रार्थना हाम्रो गुप्त हतियार हुन्छ जहिले पनि हामी जहाँ भए पनि।
धेरैले वेदी बनाउने वा प्रि-प्रार्थना वातावरण तयार पार्न सल्लाह दिन्छन् र यसले हामीलाई के गरिरहेको कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत गर्दछ।
यद्यपि यो कुरा थाहा पाउनु महत्त्वपूर्ण छ कि यदि हामीसँग यस्तै छैन भने, प्रार्थना प्रभावकारी र शक्तिशाली छ किनकि यो विश्वासको साथ गरिएको छ कि हामीले अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नु पर्ने यो मात्र आवश्यकता हो।
असम्भव प्रेमको लागि सान्ता मुर्तेलाई कडा र शक्तिशाली प्रार्थना
4 शक्तिशाली सेन्ट साइप्रियन को लागी प्रार्थना